FSX - FSX Ntughari Steam
737 Omuma multi mkpọ nsogbu
737 Omuma multi mkpọ nsogbu 2 afọ 7 ọnwa gara aga #826
Hụ mkpọmkpọ a n'anya, karịsịa ụda ndị a pụrụ ịdabere na ya, ọkụ ọkụ ọdụm dị elu na ndị ọzọ.
O yiri ka enwere okwu na ya na mberede na-arị elu ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ na-arị elu. Ndabere na mpịakọta nchịkọta na-egbu oge ngwa ngwa iji mee ngwa ngwa, na-enweghị ma ọ bụ na-enweghị nkwụnye aka. Nwee oge siri ike ịbịaru 140 na mpịakọta nchịkọta. Ikpe ikpe site na ụfọdụ n'ime ihe ndị dị na saịtị nbudata, ọ bụghị naanị m nwere mbipụta a.
A ga - enwe ekele maka ama ọ bụla gbasara ndozi ma ọ bụ gburugburu ebe obibi.
Ndumodu ikpe azu: site deckerb. Ihe kpatara: Okwu furu efu
737 Omuma multi mkpọ nsogbu 2 afọ 7 ọnwa gara aga #827
Google ma budata ngwugwu imeju 164 maka 737 ndabara.
737 Omuma multi mkpọ nsogbu 2 afọ 7 ọnwa gara aga #828
Daalụ mana ọ bụghị n'ezie. Ntinye 737 enweghị ihe ndozi nke ngwugwu a nwere.
737 Omuma multi mkpọ nsogbu 2 afọ 7 ọnwa gara aga #829
gbalịrị ịtọ ntọala taabụ na ntinye 1.7-1.8 nke kwesịrị idozi ntụpọ elu nke mberede.
737 Omuma multi mkpọ nsogbu 2 afọ 4 ọnwa gara aga #939
Daalụ natara: 17
Nke a bụ oge nke abụọ m gụrụ banyere nsogbu a, ọ ga - adị ka ihe abụghị ihe dịịrị maka 737-800 bụ isiokwu dịịrị ndị ọgbọ ochie nke usoro a. Ọ dị mfe idozi ... Gaa na CFG faịlụ maka ụgbọ elu, ma gbadaa na mpaghara nke injin [ahụ] chọọ maka ahịrị Static_Thrust = Gbanwee nkwado dị elu 4000 Ihe Nlereanya Ọ bụrụ na ọ gụọ Static_Thrust = 22980 Tinye 4000 pound nke aka ka ọ na-agụ Static_Thrust = 26980 wee chekwaa. Eche m na ị ga-ahụ na ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: nhazi
Ndumodu ikpe azu: site DRCW.
737 Omuma multi mkpọ nsogbu 2 afọ 4 ọnwa gara aga #948
Daalụ natara: 1
Ebee ka faịlụ dị CFG? Ana m agbalị ịchọta ya na enweghị m ike ịchọta ya
737 Omuma multi mkpọ nsogbu 2 afọ 4 ọnwa gara aga #949
Nnọọ, dịkwa mma pịa akara ngosi windo gị ma ọ bụ malite na akuku aka ekpe nke ihuenyo gị, gaa na kọmputa, họrọ mbanye C / program x86, microsoft, ekwesịrị inwe faịlụ. FSX, mepee ya ma nwee ndepụta ogologo ... họrọ SimObjects, wee họrọ ụgbọelu .... Nke a bu ebe ugbo elu gi FSX echekwara ... chọta ụgbọelu ị na-achọ na listi..pinye faịlụ ahụ na ndepụta ahụ ụgbọelu cfg Nke a bụ faịlụ CFG. ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka ọzọ ka m mara. Ọ ga-adị mma ịmara ụdị nsụgharị windo ị nwere. Ebe ọ bụ na ị mepebeghị faịlụ cfg n'ihu nri pịa ya ma họrọ imeghe ya "nchịkọta akụkọ [/ agba]"
Nke a bụ ihe atụ nke ngalaba ị ga - achọ:
Enwetara m nke a site na CRJ-700
oil_flow_gain = 0.002 // Nweta mmụba mmanụ
inlet_area = 19.6 // Square Feet, mpaghara ntaneti nacelle
e gosiri ọkwa_N2_rpm = 29920 // RPM, ndị na-esote ọkwa ọkwa ruru ọkwa
afterburner_av available = 0 // Afterburner dị?
reverser_available = 1 // Na-atụgharị na-agbanwe?
ThrustSpecificFuelConsumption = 0.385 // rusttụkwasị obi na mmanụ oriri (Jets)
AfterBurnThrustSpecificFuelConsumption = 0 // TSFC na afterburn / reheat ọrụ
737 Omuma multi mkpọ nsogbu 2 afọ 4 ọnwa gara aga #964
Onye njikwa oge
Enwere m arụmọrụ nkwalite ngwugwu nke na-eme ya maka gị. Ozugbo m chọtara ụzọ m ga-esi bulie ya, m ga-achọ.
Oge ike page: 0.234 sekọnd